समस्यामा परेका जनताका लागि ओली सरकारले बल्ल गर्यो यस्तो नयाँ निर्णय, कहिलेबाट हुन्छ लागु ? — Imandarmedia.com
समस्यामा परेका जनताका लागि ओली सरकारले बल्ल गर्यो यस्तो नयाँ निर्णय, कहिलेबाट हुन्छ लागु ?
विभिन्न देशमा रहेका नागरिकहरु जो स्वदेश फर्किन चाहन्छन् उनीहरुको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयले बढीमा १० दिनभित्र संकलन गरेर सूची तयार पार्नेछ । सोही सूची अनुसार क्रमशः उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउने कार्ययोजना छ । तेस्रो मुलुकबाट नागरिक ल्याउने काम एक सातापछि शुरु हुने एक मन्त्रीले बताए ।